Kwakhona ndamangaliswa ngamaxabiso ezinye zeenkonzo zokubeka iliso kunye neentlawulo ababezibiza. I-Pingdom ibonakala iyinkonzo elungileyo. Ndazinza kwi-AlertBot (malunga nexabiso elifanayo) phantse unyaka odlulileyo kwaye ndonwabile ngenkonzo yabo. Ekubeni usenza yonke into yokuseta ngokwakho kwaye yonke enye into izenzekelayo ukusuka apho ukuya phambili, i-$ 50 ngenyanga kufuneka ithenge ibhaskithi yeenkonzo ezimangalisayo.
Ndijonge ezinye zezi nkonzo zokubeka iliso ukubandakanya ujongano lwe-Twitter lwezaziso kungekudala. Ukusebenzisa i-Twitter ukuze naliphi na inani labantu "balandele" izilumkiso ziya kuba namandla abalaseleyo, ngokombono wam.
Enkosi ngophononongo lwemveliso uDoug. Nceda undazise ukuba izinto zihamba njani ekupheleni kweentsuku ezingama-30. Oko kumalunga nexesha esiceba ukubeka iliso lethu kwakhona.
Uphononongo olukhulu Doug. Kwaye ufile kanye ukuba ukujonga nje isimo se-HTTP sezibuko akwanelanga.
Besisoloko sisebenzisa iPingdom nge IFomSpring ixesha elingaphezu konyaka kwaye ndonwabile ngenkonzo.
Siseta uhlolo olufanayo - lwenziwe malunga neshumi elinesibini lovavanyo lweyunithi ngokuchasene nesicelo sisebenzisa i-API yethu (umzekelo, ingaba ifomu ingangeniswa, ngaba sinokubona idatha elindelekileyo kwisiseko sedatha, njl.njl.) kwaye sikhuphe iPASS okanye iFAIL isimo kwifayile . Emva koko i-Pingdom ijonga loo fayile nge-HTTP ukuze iqinisekise ukuba umyalezo uthi PASS, kungenjalo izilumkiso zihamba ngathi ziyaphambana.
Ndifuna nje ukwazisa iinkonzo ezi-2 ezingakumbi - zamahala mon.itor.us kwaye imonitis ephezulu iinkonzo zokubeka iliso. Enye yenzuzo yabo unokudibanisa ukujongwa komthwalo wephepha langaphandle kunye neenkqubo zokuhlola izixhobo kwaye waziswe malunga nemithombo yenkqubo ephantsi. Emva koko unokuthi uqhubele phambili ungalungisi kuphela kodwa uthintele ukusilela. Zama!
Ezo ziinketho ngokuqinisekileyo kwaye ngokwenene ndinayo iakhawunti ye-mon.itor.us. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwePingdom njengesicelo kulula kakhulu. Andikwazanga ukuqonda indlela yokwenza ezinye iitshekhi usebenzisa i-mon.itor.us. Kubonakala ngathi i-monitis ihlelwe ngokufanayo.